Olee otú Naghachi Photos si SanDisk Kaadị ebe nchekwa
Olee otú m naghachi foto na mmadụ na mberede ehichapụ ma ọ bụ na-efu na m SanDisk kaadị ebe nchekwa? Gịnị ma ọ bụrụ igwefoto na-egosi otu njehie na ihe niile m foto-efu? Enwere m ike naghachi m foto na vidiyo mgbe m SanDisk kaadị ebe nchekwa mkpọka, akwụsị ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-emerụ?
Dị ka a SanDisk kaadị ebe nchekwa njirimara, i nwere ike ịbịara iseokwu kwuru n'elu. Mgbe ọ na-eme, dị nnọọ atụla nkụda mmụọ. N'agbanyeghị ihe nsogbu ị na-izute, e nwere ihe a ohere na ị nwere ike naputa photos SanDisk ebe nchekwa kaadị, dị ka ogologo oge e nweghị anụ ahụ mmebi kaadị gị, nke ahụ bụ ikwu, sị, gị kaadị ka nwere ike achọpụtara site na kọmputa gị ma anaghị arụ ọrụ.
Mgbe photos na-efu gị SanDisk kaadị ebe nchekwa, na ha adịghị n'ezie arahụ, ma na-atụgharị-adịghị ahụ anya. Ihe ị chọrọ ime bụ na-etinye ya na-akwụsị na-eji ya ịzọpụta ọhụrụ faịlụ ma ọ bụ weghara ọhụrụ foto. New faịlụ nwere ike overwrite gị furu efu faịlụ na-eme ka ha unrecoverable. Mgbe ahụ a pụrụ ịdabere na foto mgbake ngwá ọrụ ịrụ a SanDisk kaadị ebe nchekwa mgbake ASAP.
Olee otú naghachi foto site na SanDisk kaadị ebe nchekwa
Ịchọta a pụrụ ịdabere na SanDisk kaadị ebe nchekwa foto mgbake ngwá ọrụ ana achi achi ị ohere ka mma iji naghachi foto ndị si SanDisk kaadị ebe nchekwa. Ị ga na-otu na-eme ihe kpọmkwem dị ka ọ na-agwa site a ọkachamara website. Ọ bụrụ na ị nwetara otu ma, ebe a bụ m umeala n'obi nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP), ma ọ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Ma nke SanDisk kaadị ebe nchekwa mgbake software bụ 100% pụrụ ịtụkwasị obi na ọkachamara. Ị nwere ike naghachi furu efu photos, video na ọdịyo faịlụ, n'agbanyeghị na ị na-ehichapụ, formatted ọ bụ furu efu ruru ka amaghị ihe mere, si SanDisk kaadị ebe nchekwa, nakwa dị ka ndị ọzọ na ụdị ebe nchekwa kaadị. Emecha dum ọrụ nanị na-achọ atọ nzọụkwụ.
Step1 Jikọọ gị SanDisk kaadị ebe nchekwa na kọmputa
Were Windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ mbụ bụ jikọọ gị SanDisk kaadị ebe nchekwa na kọmputa na a kaadị agụ. Ma ọ bụ i nwere ike na-jikọọ gị igwefoto na-enweghị ewere si nke kaadị. N'ụzọ ọ bụla, jide n'aka na ọ nwere ike achọpụtara site na kọmputa gị na-apụta dị ka a mbanye akwụkwọ ozi. Ọzọ, na-agba ọsọ SanDisk kaadị ebe nchekwa foto mgbake software na pịa "Malite" ke akpan window na-amalite ọrụ gị.
Step2 iṅomi furu efu foto gị SanDisk kaadị ebe nchekwa
Ugbu a ime ka nzọụkwụ nke abụọ. Gị SanDisk kaadị ebe nchekwa na-ahụrụ site omume na-egosi dị ka fllow. Họrọ ya na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu Foto ndị dị na ya.
Step3 Preview na-agbake Foto ndị dị na SanDisk kaadị ebe nchekwa
Ebe a, anyị na-na na ikpeazụ nzọụkwụ ugbu a. Ịnwere ike ihuchalu photos na-hụrụ site omume na-ego àgwà. Mgbe ahụ akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị mbụ SanDisk kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke Sandisk kaadị ebe nchekwa mgbake
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si a SanDisk Kaadị ebe nchekwa